Kukhona abalobi abaningi kakhulu futhi izintatheli, ogama izincwadi nezihloko zaziwa emhlabeni wonke. Izinhlobonhlobo ecebile ezincwadi njalo ejabulisa Ongoti yobuciko izingcezu ezithakazelisayo futhi engavamile, sithwele kunencazelo ejulile futhi kusenza sicabange ngokumba abafundi abaningi. I hero indaba yethu iba umbhali ezimsebenzi ethandwa futhi yesimanje - Yan Valetov. Futhi ake ukulotshwa ngoba - kungcono nje yokuzilibazisa, namanje wakwazi ukunqoba izinhliziyo we amaningi abafundi.
Indaba yokuphila kanye search izincwadi zokuqala
Yan Valetov, ogama biography ugcwele impumelelo, wazalwa Agasti 26, 1963 ku laseDnepropetrovsk. Yena uhlala futhi usebenza kulo muzi futhi ngalesi sikhathi. Ian ushadile futhi unezingane ezimbili. Anakho ezicini eziningi zokuzilibazisa ngaphandle lokubhala, eziyisisekelo - ukudoba, ukuvakasha kanye izithombe.
izindaba wakhe wokuqala lemifisha yesayensi Yan Valetov wabhala kabanzi phakathi ukuqeqesha esikoleni emabangeni eyinhloko. Kodwa baye ayizange esikalini futhi kungukuthi ishicilelwe, ecindezeleke kakhulu wemibono abasha. Kodwa Yang akazange adikile ungalilahli ithemba. Waqhubeka ukubhala, ukuzama izinhlobo ezintsha futhi esisha, kwakwenziwa search engapheli. Kodwa imisebenzi yakhe ekuseni baye lokhu kwakungakaze kunyatheliswe.
Yan Valetov futhi International Union of KVN
Ngo-1987, i-Club of bejabule futhi wasisebenzisa uvele ithimba egqamile futhi okuqala eNhlangano laseDnepropetrovsk State University, kangcono eyaziwa ngokuthi DSU. Ngo-1988 waba isekela iqhawe elikhulu, futhi uye wathola isihloko ekhethekile ngemva konyaka - ". Champion of Improvisation" Ngemva kwalokho, leli qembu iwine eziningi nenjongo imiklomelo wakhe. Yena uyohlale khumbula isibindi izilaleli amahlaya abo futhi reprises, okubonisa yaseshashalazini yangempela KVN wezwe. Yan Valetov ibinguShamuti yalesi team kanye nomthelela ekuthuthukisweni yayo.
Omunye abadali "Brain Ring"
"Ingqondo-ring" - umdlalo yengqondo ebhaliwe, neqhaza ekuthuthukiseni okwakwenza Yan Valetov. Waba kwalabo abakhuphuka ngalo kanye ehlanganiswe umbono. Lo mdlalo kuzokwenza ngokufanelekile ukuthatha indawo yayo efanele ezikrinini ithelevishini wezwe kusukela ngo-1990. Engakabi yayo usezuze izinhlobo eziningana, futhi futhi namanje nesithakazelo abantu bobudala obungefani. Lo mdlalo inketho ezinhle abafundi kwamasiko yokuchitha isizungu, osebenza nabo kanye namaqembu abangane.
"Yini? Kuphi? Nini? "
Lolu hlelo ithelevishini hit emoyeni ngo-1975. Waba ukhokhokazi yezinto ezithakazelisa kakhulu kanye nezinhlelo ethandwa kakhulu bokusungula kusukela buqala. Sekuyisikhathi eside Yan Valetov yilungu club "Yini? Kuphi? Nini? ". Wayephethe wobuthakathaka iminyaka yezimpi bokusungula ahlukahlukene, futhi lezi imidlalo bebelokhu ukhiye ohlwini izidingo zakhe.
Yang eyingoduso kakade zisencane amadala obhala ngenkuthalo. Wayengasabi ukuze uzizamele izinhlobo nezitayela, futhi ngo-2005 band ezikhishwe inoveli yakhe yokuqala esikhathini uhlobo Thriller kwezomnotho ngokuthi "Ibhange kwesokunxele Styx." Ngemva kwalokho iziqondiso main lapho ebhala, yilezi:
temibhalo yephrozi netindzaba wesimanje.
Yan Valetov, ogama izincwadi ezidumile emhlabeni wonke, futhi kuye kwakhiwa nezindawo ezihlukahlukene izihloko lesibonwa, ukuzikhethela ikakhulukazi kwezepolitiki. He is kumbhali ezikhuluma kwezamabhizinisi ibhizinisi, okuyinto yashicilelwa ngaphansi mbumbulu Boris Bitner.
Yan Valetov kwaba umlobi wezincwadi eziningi, kodwa eshicilelwe abayisikhombisa kuphela. Njengoba esho, isizathu ukuthi usekhonze isikhathi yayo. Kuhle ukuba kufanele ngokuthi incwadi ka imijikelezo ezimbili - "Bona Izwe Ayikho Elomuntu" futhi "Damned". Uchungechunge zakamuva akuyona phezu okwamanje, umbhali usebenzela imisebenzi sokugcina. Izincwadi ezabhalwa umjikelezo wokuqala kule uhlobo eqanjiwe lempi futhi postapokalipsisa. Usebenza njenge "isiqalekiso" umjikelezo basonta uhlobo yesayensi ukulwa oluxube fantasy.
"Bona Izwe Ayikho Man" - Incwadi yokuqala enyatheliswe umlobi, esanyatheliswa ngo-2007. Abafundi ngokuyinhloko kuthinta okwangempela umsebenzi ukuthi ngokoqobo kuletha ezenzakalweni, okuyinto ebekwe emakhasini. Baningi Izibuyekezo rave kanye nezincomo kwesokunxele ikheli nombhali abagxeki futhi abafundi, ukuvumela omunye ukuhlola inoveli njengoba wobuciko etemibhalo kweqiniso. Kusukela esigabeni sokuqala kakhulu incwadi kukhona bushelelezi kodwa ifuna banciphise umfutho wamanzi ezijulile indaba, futhi indaba esitshela umbhali, ibonwa ngempela kalula, naphezu zikhathi ezinzima kanye nemicimbi.
"I lwemilando Uqalekisiwe" - omunye inoveli John Valetova, okuyinto ubhalwe futhi wanyatheliswa ngo-2010 njengengxenye kakhulu uchungechunge oluthi "Damned". Kuyo, umlobi uchaza indaba ukuhluka likaJesu Kristu, ethi wayeyindoda, hhayi uNkulunkulu. Njengoba ubufakazi yenkulumo yakhe kuholela Jacks idokhumenti eziye zatholwa abavubukuli, elichaza umsuka egameni likaJesu esinjengesomuntu, okwathi kamuva wakhethwa ukuba abantu bakaNkulunkulu. Kodwa le dokhumenti zingakhiqiza ibe usongo olukhulu umbono okunethezekile boPhezukonke futhi indima yalo kuleli isonto, ngakho iphepha zibhujiswe.
Imicimbi echazwe kule ncwadi elingathathwa njengoba lingabi nesithakazelo, ngakho yena, kanye nemisebenzi yangaphambili umbhali, wathandwa izinhliziyo anhlobonhlobo abantu. On ke wagomela, ke akulahlwa, kepha ngesikhathi esifanayo ngokungenamkhawulo bayahlonishwa kumdlali nesibindi ngokubhala lo msebenzi.
Yan Valetov - indoda umnikelo ukuthuthukiswa amasiko zobuciko yezwe kubaluleke kakhulu. Yena ngempumelelo ihlanganisa ngokubhala, imisebenzi yenhlangano kanye zokuqalisa ibhizinisi lakho siqu. Ian - indoda okukhulu ekhaya, indoda enothando futhi othandekayo futhi yise. Ubizwa ngimatasa, ngokuphindaphindiwe waveza yena, kodwa izibophezele self-ukuthuthukiswa kanye self-ngcono. Naphezu ubuvila zemvelo, lapho wayephikisana obala uyavuma e izingxoxo eziningana, Jack wakhuthaza abafundi bakhe ukuba imisebenzi emangalisa kuhluka yokudla kokuvamile isethulo abanekhono. Njalo ebusuku Ian isebenza ekubhaleni incwadi entsha, okuzoba phambili uchungechunge yakhe "The Damned". Umsebenzi isivele ngabomvu abalandeli abaningi ngomsebenzi wakhe. Ingqondo imidlalo ekudalweni nokuthuthukiswa zazo wathatha ingxenye, zisekhona phakathi ethandwa kakhulu kuyithelevishini. Le ndoda emangalisayo ngokoqobo waphefumulela temibhalo yephrozi netindzaba yesimanje nekubhala iyonke, ushiya izibazi emlandweni izincwadi.
Vsevolod Garshin, inganekwane "Sicoco-isihambi": isifinyezo umsebenzi, ngesakhiwo, abalingiswa
Uthando - "Dummy" enovelini Richarda Oldingtona "Bonke abantu -. Izitha"
Uhlobo Umlando. uhlobo zomlando ezincwadini
Izakhi ncwadi. Incwadi Flyleaf - Yini leyo?
Amafilimu Japan engcono: phezulu 5
Umehluko omkhulu kusukela cell yemifino isilwane: + Ithebula texte
Ingcindezi udlulisela for futha: Izinzuzo, izici zedivayisi, uxhumano kanye ukulungiswa
Ukukhetha ubukhulu kwesokudla Sock madoda
Play izinyawo, ngicabanga ekhanda lakhe; ngalokho ukubiza iqembu on ibhola
I amaprotheni ku umchamo. izimbangela